kubuzwe ngu sgtck72 8 izinyanga ezidlule
kubuzwe ngu zlloyd1 8 izinyanga ezidlule
kuphendulwe ngu zlloyd1 8 izinyanga ezidlule
Since the last update, whenever I close Firefox and restart my computer, my tabs are not restored when I open Firefox again. I use Firefox at work, and have tabs for vari… (funda kabanzi)
kubuzwe ngu SharynK 8 izinyanga ezidlule
When I visit any Add-ons page, instead of the button to install the add-on, a button stating "Only with Firefox - Get Firefox now" appears. Clicking this button takes me … (funda kabanzi)
kubuzwe ngu mmcnally 8 izinyanga ezidlule
kubuzwe ngu gbjacobsen 8 izinyanga ezidlule
kubuzwe ngu icemandave 8 izinyanga ezidlule
kubuzwe ngu RJASeven 8 izinyanga ezidlule
When opening Firefox on a desktop or PC, my homepage does not load, instead it opens a blank tab. It does this on every desktop version of Firefox across multiple PCs, bu… (funda kabanzi)
kubuzwe ngu hamiheim 8 izinyanga ezidlule
Mozzella updated something, and then I get a window that says I won't get the extensions unless I do something. Then I get the instructions about what I am to do and it'… (funda kabanzi)
kubuzwe ngu Outdated 8 izinyanga ezidlule
kubuzwe ngu Cobbers 8 izinyanga ezidlule
kubuzwe ngu appraisenj 8 izinyanga ezidlule
Tweetdeck for example looks horrible because it uses default white browser scroll bars. ( https://tweetdeck.twitter.com/ ) It's one of my primary reasons for not ditchin… (funda kabanzi)
kubuzwe ngu Squishydew 8 izinyanga ezidlule
After years and years of trial and error I finally, (I said finally) got my home page like I want it; with 3 top rows of icons of allllll of the places I regularly visit.… (funda kabanzi)
kubuzwe ngu Jondee 8 izinyanga ezidlule
kuphendulwe ngu Jondee 8 izinyanga ezidlule
kubuzwe ngu rontr2 8 izinyanga ezidlule
kubuzwe ngu Exlipse 8 izinyanga ezidlule
kuphendulwe ngu Exlipse 8 izinyanga ezidlule
kubuzwe ngu Idahoian 8 izinyanga ezidlule
kubuzwe ngu Sonne21 8 izinyanga ezidlule